ရွှေရတုမှတ်တမ်း: ကူနီကျွန်းက နတ်လမ်းညွှန်
ကဲ ကိုဂျီးကျောက်ရေ.... ဧရာဝတီအတွက်တော့ ရင်လေးစရာမလိုပါဘူးကွယ်... ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ဆီက တရုတ်မလေးတွေချည်း တန်းစီးပြီး မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားကနေ ရှုရှုး ၀ိုင်းပေါက်ပေးလိုက်ကြရင် ဧရာဝတီပြန်အသက်ရှင်လာမှာပါ... အဲ့ကျမှ ကိုဘကျောက်တို့ရေပြန်ကူးလှည့်ပေါ့နော...
ဦးမင်းကျော်ကပြောတယ်... သူအမေရိကားမလာချင်ဘူးတဲ့ဗျ... တော်ကြာသူပါ lotion လိမ်းနေရမှ မင်းကျော်ခေကို ဖြစ်မှာ ကြောက်သတဲ့ဗျာ....
ဘိုင်သဝေး... နဗီဂိတ်တာ ဆိုတဲ့ ဟာကြီးကိုလဲ စိတ်ညစ်အောင် သွားသွား မလုပ်ပါနဲ့ လေ... :D
တခါတုန်းက သတင်းစာထဲ ဖတ်လိုက်ရတာလေ။ ကားတစီးက navigator ညွှန်သလို turn right, turn left နဲ့ မောင်းနေတာ နောက်ဆုံး မြစ်ထဲကျသွားသတဲ့။
ဘကျောက် မြင်းစီးကျောက်ရုပ်ဆိုပြီး မှတ်တာက တော်သေး။ အဖေ့မိတ်ဆွေတယောက်က အိမ်ရှေ့မှာ ဂမုန်းပင်လေးနဲ့ ဆိုပြီး မှတ်ထားတာတဲ့။ ဒေါ်လေးမေကတော့ အတန်းထဲက အာဖရိကန်သူတွေ ရုပ်တွေမမှတ်မိတော့ ဆံပင်နဲ့မှတ်ထားတာ။ သူတို့ဆံပင်က အတုတွေတပ်ပြီး ခဏခဏ ပြောင်းနေတော့ မျက်စိကိုလည်ရော။ :))
ဘကျောက်ရေ ... ဆေးကုပြီဆိုရင် အစားအသောက် အနေအထိုင်အစစ ဂရုစိုက်တောာ့နော်။ နေ့စဉ် ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဘကျောက်အတွက် မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။
ဘကျောက် ဝေဒနာ အမြန်ဆုံး သက်သာ ပျောက်ကင်းပါစေ
နတ်ပွဲးတွေ ၊ ဘုရားပွဲးတွေလဲ ပေါပါတယ်။ ကိုကြီးကျောက်က ဦးမင်ကျော်ကို လမ်းပြခိုင်းခြင်ရင် သူကလဲ ဆိုင်ကယ်စီးဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းကျင့်နေရမှာပေါ့။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဒေသကနတ်တွေနှင့်လဲ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းပြီး လမ်းကျွမ်းအောင် လုတ်ရဦးမယ်တဲ့။
ကိုကြီးကျောက် သွားခြင်တဲ့ အခါ အပေါင်းအသင်းတွေနှင့် လျှောက်သွားနေလို့နဗီဂိတ်တာလေးပဲ ပြန်သုံးနေရဦးမယ်နော် ။
ကျမ္မာရေး အတွက် ခံနိုင်ရေ ရှိအောင် အစားစား၊ ရေသောက်၊ လမ်းလျှောက်လဲ လုတ်ပါ။ အညောင်း အကြာကြီး မထိုင်နဲ့ ။ တရားမှတ်ရင်လဲ က္ကတ္ထိယပုတ်ကို အဆင်ပြေသလို ပြောင်းမှတ်ကြည့်လေ နော်။ ဂရုစိုက်ပါလို့ ပဲ ပြောတော့မယ်နော် .. .. ..။
နတ်ပွဲကို navigator နဲ့သွားပြီး ၊ ၀ါရှင်တန်မှာ ကိုကြီးကျော်နဲ့ သွးပေါ့ ဘကျောက်ရဲ့။
မြန်မြန်ဆန်ဆန် နေကောင်းပြီး ဖလမ်းဖလမ်းထအောင် စာတွေ ဖတ်နိုင်ရေးနိုင်ပါစေတော်။
အနိပ်ကလေးတွေက စလာရင်တော့ ကျောက်သစ္စာရှင်ကြီးလည်း ဘာခံနိုင်မှာလည်းနော
သြ မွှားလို့ အနိစ္စသဘောနဲ့ နတ်တွေလည်း ခေတ်သစ်နတ်ဒိုးနဲ့ ရောသမမွှေနေတာဆိုတော့ အခု ဘကျောက်ရဲ့လမ်းညွှန်ဂိုက်ကြီးကိုလည်း မြင်းမစီးခိုင်းပါနဲ့တော့လေ အားရှိအောင် စားဗျာ အေးအေးလူလူနားဗျာ မေတ္တာကြောင့် ပျောက်ကင်းစေဗျာ။
ကိုယ် မသိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုကြီးကျောက်။ မြင်းခြံ မြို့က ဘုရားပွဲ၊ နတ်ပွဲတွေကို မျက်စိထဲ မြင်လာပြီး နွားလှည်းတောင် စီးချင်စိတ် ပေါက်တယ်။ ပျော်စရာကြီးနော်။ ကိုကြီးကျောက် နေကောင်း ကျန်းမာလို့ ဘလော့ဂ်မှာ စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။
ရွှေဖီငုံကင်း အင်ကြင်းတွေကနီ ...
ရဟန္တာ တွေတောင် ဈာန်လျောတဲ့ လ ဆိုပေတာကိုး ...ကိုကျောက် .. တခုခု ကို လွမ်းနေပြီ ထင်တယ် ...
အင်း ကိုကျောက်ရဲ့နတ်လမ်းညွှန်မျိုး တစ်ယောက်လောက်ရရင်တော့လည်း ကောင်းသားဗျာ...ဒါပေမယ့် နေ့ရောညပါ စိတ်အေးအေး နေလို့ရတဲ့ မြို့ကိုပို့ခိုင်းရင် ဘယ်ကိုများ ပို့မလဲမသိဘူးဗျနော...
ကိုကြီးကျောက်တစ်ယောက် ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်း ရောဂါပျောက်ကင်းသက်သာသွားမှာပါ၊ ဂျပန်က လသာည လည်း ငလျှင်ကြားမှာ အဆင်ပြေ အန္တရယ်ကင်းတယ်ကြားပါတယ်။
ရွှေဘိုကျောက်ရယ်လေ ခွာသံ နှာသံ ပြင်းသလေ့လေ့ ၊ ကတောက် . . . ကတောက် . . .ကတောက် . ။
HIV စွဲကပ်နေတဲ့ ကြက်လို လူရုပ်မပေါ်တော့တဲ့ ဧရာဝတီတဲ့လား
ဆေးကုသမှုတွေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး နေကောင်းကျန်းမာ ရွှင်လန်းစွာဖြင့် စာများများရေးနိုင်ပါစေ ကိုကြီးကျောက်ရေ...
I try my best to type in Burmese during Thingyan:P
ဘိုးတော်ကျောက် ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒင်မြည်
တယ်ဆိုပြီး ဂျပန်ဖက် တိုင်းခန်း မလှည့်နဲ့နော်
ပြင်သစ်လေယာဉ်ကွင်းကနေ မောင်းလိုက်တာ မြို့ ပြင်ကို ၂ခေါက်တောင်ရောက်သွားတယ်ဗျ..
ကျနော့်တို့ အတွက်လဲ လမ်းညွှန်ရှာပို့ ပေးပါဦး..
ထရေ တကျိုက် ကြက်ကြော် တကိုက် လုပ်ခဲ့မှာ မြင်ယောင် နေပါ့ဗျား။
မုန်ဖြူမုန် နီ ကြော်ထားတာ က ပုန်းမကြည် မတင်ခင် မစားရ လို့ ကျနော်တိုက ကလေးတသိုက်အတွက် မုန့်နီအိုး က ကပ်ကျန်နေတဲ့ မှုန့်နှစ် ကလေး တွေကို ရေနဲ့ ကျင်းပြီး မုန့်ချီး ကြော်ကျွေး တာအရင်စား ရပါတယ်။
သူများတွေ နဗီဂေတာ တွေ ဂျီပီအက်စ တွေ သုံးကြပေမယ့် ကျနော် ကတော့ အခုအချိန်အထိ မြေပုံကြီး ဖြန့်ဖြန့်ကြည့်ရတာ ပဲအားရတယ်ဗျာ။ ကားထဲမှာ ဆီတော့ အပြည့်ဖြည့်ထား ရတယ်။ :P
ဟိုးတုန်းက ရပ်ဓလေ့ ရွာဓလေ့လေးတွေက သိတ်ချစ်စရာ ကောင်းတာပဲနော်...လွမ်းမိတယ် ခုထိ သတိရနေတုန်း ပြန်လာပြီးကတည်းက အလုပ်ထွက်ချင်စိတ်ပဲ ပေါက်နေတော့တယ်....
ကျောက်နှမ ကေ said...
ကိုကြီးကျောက် ..ပြောလိုက်မှပဲ..သောင်ထွန်းနေတဲ့..ဧရာဝတီ မြစ်ကလေး ကို..ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက်..တစ်တစ်ခွခွ.. ခံစားလိုက်ရတော့တယ်..။း)
နာမယ်နဲ့ လိုက်အောင်သာ..မာ ပါစေ..ကိုကြီးကျောက်ရေ..
မေကျောက်.... ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ပြုံးစရာစာတွေဖတ်ဖို့စောင့်နေတယ်း)
ချီးယားစ် အားတင်းထား ဗျ ။
ဦးဗောင်းစင်းနဲ့မြင်းဖြူရှင်ကျောက် ၀ါရှင်တန်မိုလို့ တော်သေးတာပေါ့ အခု ကယ်လီဖိုးနီးယားရော ဟာဝိုင်ရီရော လန့် နေရတယ် ဂျပန်ကနေ မိုးမင်းကြီးထွက်သွား တာ သေချာမယ် ထင်ပါရဲ့ လသာည ခွန်သဒါ ကြည်ကြည် တို့ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး နေပါတယ်
ဘကျောက် ကျန်းမာရေးမြန်၂ ပြန်ကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။
အခုတလောကပ်ဆိုက်နေတော့ကံဆိုးလို့ ကြုံရင်တောင် ကယ်သူပေါ်ပါစေလို့အားလုံးအနရယ်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတယ်။
ဟုတ်တယ် ဆောင်းရေ..LA ကမိတ်ဆွေတယောက်ပြောလို့ သူတို့ဖက်မှာ ငါးတွေသေပြီး ကမ်းစပ်မှာမျောနေတာ ၄, ၅ ရက်လောက်ရှိပြီတဲ့..အရင်က မတွေ့ဘူးတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေလဲ အပြင်ထွက်တာတွေ့ကြသတဲ့..ကယ်လီဖိုးနီးယားဖက်မှာ ငလျင်လှုပ်နိုင်တယ်နော်..သတိထား
အညာဘက်က နတ်ပွဲတွေအကြောင်းတော့ မရောက်ဖူးပေမယ့် ဆရာမခင်ခင်ထူး ဝတ္ထုတော်တော် များများမှာ ဖတ်ဖူးနေတော့ မျက်လုံးထဲ ပုံပေါ်နေတော့တာပဲ။
လမ်းညွှန်ဖို့များ ကိုကြီးကျော် တ နေရသေးတယ်။
ကားပြိုင်ပွဲတွေမှာလို ဘေးထိုင်ခုံမှာ ကောင်မလေး ကို မြေပုံကိုင်ခိုင်းပြီး အဖော်ပြုတာ ပိုမကောင်းဘူးလား။
ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာတယ် ကိုကြီးကျောက်ရေ။ အမြန်သက်သာပျောက်ကင်း သွားဖို့ ဆုတောင်းပေးလျက်ပါနော်။
ဘကျောက်။ နေဗီဂိတ်တာက အစုတ်မို့လို့နေမှာပေါ့ဗျ။ လမ်းပဲလျှောက်ပေါ့ဗျာ။ ကောင်မလေးတွေလဲ ငေးရင်း၊ ကျမ်းမာရေးအတွက်လဲ ကောင်းပေါ့
ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီးလို့ ဆိုတဲ့ ဧရာဝတီခမြာ လူရမ်းကားတွေနဲ့ အချောင်နှိုက်တဲ့ အိမ်နီးချင်းပေါက်ဖေါ်တွေ လက်ထဲမှာ HIV စွဲကပ်နေတဲ့ ကြက်လို လူရုပ်တောင်မပေါ်တော့ပါဘူး၊
အဲဒီ စာသားလေးတော့ ကြိုက်တယ်ဘကျောက်ရေ။
နတ်လမ်းညွှန်တော့ ဘကျောက်ပြောသလို ပင့်လို့ရရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါ့။ ကိုကြီးကျော် နတ်ပွဲကတော့ ငယ်ငယ်က မုန့်တွေ စားရလို့လိုက်ဖြစ်တယ်။ ဘာလုပ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ သေချာမသိဘူး။
နောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါဘကျောက်။
ကိုကြီးကျောက်ရေ... မသိတာတွေသိလိုက်ရလို့ ဗဟုသုတလဲရ ရီလဲရီရတယ်...
ကိုကြီးကျောက် အမြန်နေကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်....
ကိုကြီးကျောက်ရေ... URL မှာလိပ်စာတပ်မိသွားလို့ sorry နော်...
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး နေကောင်းမကောင်းတော့ မပြောတတ်ဘူး
စစ်ကိုင်းနားမှာ အကျောတွေပေါ်ပြီး ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်နဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ ဒီတောင်ကို ကျော်ပါစေသား။
အဲဒါမျိုးကို ဒီမှာတော့ တုံတုံ တဲ့။ အဲဒီလိုလဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်သွားတာ အေဒင်ဘရာနဲ့ မန်ချက်စတာကို တစ်နေ့ခရီးလောက် ဖြစ်သွားရော။ ဒီလောက် နီးနီးလေးဟာကို။ ဘကျောက်ပြောတဲ့ နတ်လမ်းညွန်ဘဲ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။း)))
အကိုကြီးကျောက်ရေ အခုမှပဲ လူကောစက်ကော ရတော့တယ်။ မုန့်ဖြူ၊မုန့်နီ အကျော်ငယ်ငယ်ကတော့ တောကိုအလည်သွားရင် စားဖူးတယ် မေးကြည့်တော့ ရိုးရာတင်တယ်ဆိုလားပဲ။
DC လာလည်ရင်တော့ မုန့်လုပ်ကျွှေးမယ် ပြောသလားလို့ အဲဒီမုန့်ဆိုမဆိုးဖူး။ ကယ်လီဖိုးနီးယားက လူတွေကတော့ အခုတလောစိတ်ပူနေကျတယ် ကျမအတွက်တော့ မှန်နေသလိုပဲ အရှေ့အရပ်မှာနေပြီ အရှေ့အကြောင်းတွေ ပြောနေရတာ စိတ်တော့အေးရသား၊ ကိုကြီးကျောက်ရေ ဂျီပီအက်စ် ဝယ်ရင်လေ မန်မိုရီများတာကိုဝယ်ပါ နင်မို့ဆို ကားမောင်းသလောက် စက်ကမလိုက်နိူင်ဘူး ဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ဒီစီ ကအဝိုင်းတွေကို အဲဒီစက်နဲ့ ဘယ်နှစ်ခါပတ်ရသလဲ၊
စာတွေကောပြင်ဖြစ်လား ဆြာညို နဲ့က တမြို့ထဲဆိုတာ တနေ့ကမှသိတာ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်နေကောင်းကျန်းမာနေတာကို ဝမ်းသာပါတယ်။ စားနေသွားကိုအသိလေးနဲ့မှတ်ပါတဲ့ ဒီကနေ့ဘဲ အပျိုကြီးက ပြောခိုင်းတာပါ။
ကိုကြီးကျောက်ရေ ... အမေတို့ရွာမှာလဲ မုန့်ဖြူမုန့်နီ နတ်တင်တာတွေ ရှိတယ်။ အညာဘက်က ဓလေ့နဲ့တူတယ်။
Navigator ဆိုလို့ အဲ့ဒါလေးရှိလို့ ကိုကြီးကျောက်နှမ အူတတ အလုပ်ဖြစ်နေတာ။ တစ်ခါတစ်လေစဉ်းစားမိတယ်။ ငါ့နှယ်နော်။ GPS ရှိတဲ့ ခေတ်မှာ လူလာဖြစ်ပေလို့ပဲလို့ ...